Ujeedada tababarkan waa in lagu baro hal saac gudaheed sida aad uga faa'iidaysan kartoemail-Suuq gaynta si kor loogu qaado ganacsigaaga.
Waxaad baran doontaa:
si aad u abuurto olole iimaylka A ilaa Z si aad ula xidhiidho macaamiishaada ama rajadaada. U dirida warside ama dalacsiin dadka wax ka yaqaan meheraddaada way la soo xidhiidhaan oo waxay abuuraan iib.
U samee foomka diiwaan gelinta liiska xiriirkaaga si aad si fudud u ururiso iimaylada. Dhawr gujis gudahood waxaad yeelan doontaa bog degitaan oo shaqaynaya.
Uruuri iimaylada si toos ah adiga oo aan ku abuurin wax cusub boggaga tuuji. Ka faa'iidayso macluumaadkaaga jira (ebooks, waraaqaha cadcad, iwm.) si aad u soo ceshato iimaylada, intaad ku sii jirto u hoggaansanaanta GDPR.
Deji oo u soo dir taxane iimaylo ah oo toos ah macaamiishaada. Isticmaalka isku xigxiga ee iimaylka marka la barbar dhigo hal fariin ayaa suurtogal ka dhigaysa in lagu dhufto xiriirka macaamiisha dalabyadaada iyo sidaas darteed si aad u horumariso iibkaaga.
Tababarkan waxa uu isticmaalaa SMessage-ka suuqgeynta iimaylka. Adeeggani waxa uu bixiyaa qalab suuqgeyn email ah oo dhamaystiran oo leh jawaab celin toos ah iyo nidaamka ururinta ciwaanka emailka 15 euro bishii, taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah adeegyada ugu tartanka badan suuqa maanta.
Hagaha Dhamaystiran ee suuq-geynta iimaylka ee leh SMS-ka Oktoobar 25th, 2021Tranquillus
READ Python 3: laga bilaabo aasaaska ilaa fikradaha horumarsan ee luqadda
horeTababarka Muuqaalka Microsoft | MAXKAMAD DHAQAN v.2016 - v.2019
socdaKu xooji tixraacaaga dabiiciga ah qumbaha semantic